Kubalulekile Imiba esisebenza ngayo | Adendorff Attorneys
Ibango lokonzakala libango elisemthethweni lembuyekezo ngenxa yokonzakala emzimbeni okubangelwe kukungakhathali okanye okwenziwe ngomnye umntu, yinkampani okanye ngumbuso.
Umonzakalo ungenzeka emzimbeni okanye nasemphefumlweni. Oku kuquka oku kulandelayo:
Umonzakalo weNgqondo noweNtloko
Umonzakalo okhokelela ekuphulukaneni nelungu lomzimba
Umonzakalo emphefumlweni emva kokugagana nesiganeko esibuhlungui (PTSD)
Ukuhlala uxhalabile kwaye udakumbile
Iingxelo zonyango okanye iingxelo zonyango olufunyenweyo ziza kudlala indima ebalulekileyo ekungqineni imeko yomonzakalo emzimbeni ngokunjalo nonobangela.
Ibango lingabakho kuphela xa umonzakalo ubangelwe kukungakhathali komnye umntu. Ingaba umenzi wokugwenxa wenze into ibingenakwenziwa ngumntu oqiqayo, okanye ingaba umntu lowo usilele ukwenza into ebinokwenziwa ngumntu oqiqayo ukuthintela umonzakalo?
Phambi kokuba wenze ibango ukuze ufumane imali yembuyekezo kufuneka ube nobungqina bokuba omnye umntu wenze okugwenxa. Umonzakalo womntu usekelwe ekubeni ingaba kwenzeke into ebekumele ukuba ayenzekanga, yenzeke ngokungakhathali, okanye ibangele umonzakalo/ukufa kwaye ibangele ukuphulukana nokuthile okanye udale iindleko. Nangona kunjalo, ukuba konke oku kugwenxa kungangqinwa, ityala kuthiwa alinasihlahla, ngako ke akusayi kubakho mali ihlawulwayo.
Umonzakalo awufumeneyo umntu, ngokunjalo nemali yembuyekezo ayifumeneyo, ayifani kwityala ngalinye. Imali yembuyekezo iquka oku kulandelayo:
Iindleko zesibhedlele nezonyango esele zenziwe
Iindleko zesibhedlele nezonyango ezinokwenziwa kwixesha elizayo
Ukuphulukana nengeniso okunokubakhona kwixesha elizayo
Omonakalo ngobubanzi weentlungu nokusilela kokuthile.
Umonzakalo okhokelela ekufeni kwexhoba
Nje ukuba umonakalo ukhokelel ekufeni kwexhoba, amalungu osapho angafaka ibango:
Ukuphulukana nekxaso yemali
Abakwa-Adendorff Attorneys, iqela lethu linolwazi nobungcaphephe obufanelekileyo bokumela amaxhoba neentsapho zawo kule miba inzima kangaka. Ukufumana imali akunakuthath’ indawo yento eliphulukene nayo ixhoba, kodwa siyazama ukufumana eyona mbuyekezo ingcono ukwenzela umfaki-bango ukuze akwazi ukwakha ubomi bakhe ngokutsha.
Amabango eNgxowa-mali yeNgozi yeNdlela
Iintlobo ezithile zomonzakalo
Umonzakalo eNtloko neNgqondo
Ukushunqulwa ilungu lomzimba
Ukuqhuba phantsi kweempembelelo